Zita rerosi uye Usataure nevasingazive. Nhepfenyuro dzeTV | Zvazvino Zvinyorwa
Mazuva ano pasina sarudzo kunze kwekuve pamba, isu tashandisa mabhuku uye akateedzana Kufambisa nguva. Ikozvino kune kupihwa kwese kuravira. Kufananidza pakati pezvinyorwa, firimu neterevhizheni kwagara kuchishanda, kunyangwe nehupfumi hwakaenzana kazhinji mushanduro dzakatorwa kumifananidzo. Nhasi ndinounza dos (ese ane zvitsauko zvisere) ayo anogona kuonekwa izvozvi zviri zviviri zviri pachena uye pamapuratifomu edhijitari Zita rerosi y usataure nevasingazive, yezvakasiyana zvakasainwa Umberto Echo y Harlan coben. Uye aya ndiwo maonero angu.
1 Zita rerosi
1.1 Iyo bhaisikopo
1.2 The Serie
2 usataure nevasingazive
Musoro watove yechinyakare yechinyakare, uye akabudirira kwazvo uye akatengeswa, emunyori weItari Umberto Echo uye yakaburitswa mu 1980. Haana kudzokorora iyo feat zvakare mumabasa ake akazotevera, kunyangwe zita rake rakaumbwa sei nemavara egoridhe mune zvinyorwa zvemazuva edu. Kubvisa izvo (zvakasara) zvikamu mu ChiLatin chii chiripo uye (zvakawandisa) kusabatwa nedzidzo yezvouMwari, nhoroondo ye kuferefeta mukushungurudza abbey yeveFranciscan friar William weBaskerville yakataurwa nemudzidzi wake mudiki Adk yaMelk muItaly ye XIV zana ramakore zvakandifadza semamiriyoni evaverengi pasi rese.
Uye saizvozvowo iyo firimu vhezheni yaakatungamira mukati 1986 mumwe weavo madhairekitori kuti zvese zvavanoita zvinowanzo fanirwa, iyo French Jean Jacques Annaud. Zvisinei, panguva iyo vatsoropodzi vakanga vasingafariri pamusoro pake kana firimu, asi vanhu vose vaifarira. Nekufamba kwenguva, yave zita rechinamato. Zvakawanda zvemhosva yekudhonza kunozivikanwa yaive pa rudyi kugovera. Sean Connery Yaive Guillermo de Baskerville hongu kana hongu uye mutsva Christian slater zvakare yaienderana Adso de Melk chaizvo.
Vakabatanidzwa nhevedzano ye divi rinoshamisira Chemhondoro F. Murray Abhurahama, mubvunzi anotyisa Bernardo gui. Kana iyo inogara iri hombe Ron Perlman, director's fetish actor uyo, zvese zvemuviri uye tarenda, akaruka hunhu hwakashata uye nekuonga mutambi semonaki Salvatore de Montferrate. Uye zvakare, vamwe vese vatambi hazvizivikanwe izvo, chaizvo nekuda kweizvozvo uye zvakare nekuda kwayo chaiwo vefizikiki vakatsvaga nehana naAnudud, vakabudirira sanganisa uye ubatanidze zvakakwana negadziriro, matauriro uye mwenje iyo nyaya inobuda.
Zvino na 8 zvitsauko uye kutepfenyura mu iyo 1 yeTVE, tine izvi miniseries ndiani anotyaira Giacomo Battiato uye iyo ine tekinoroji ye XXI remakore kugadziriswa, kuwedzerwa uye chii chinovandudza? iyo vhezheni. Zvichava zvakafanira kusvika kumagumo kuti uve nemaonero akazara. Asi yemachapter 4 anoenda, ndakavaona vachisvetukira kuuraya nekugara nevashoma kwazvo. Zvichida, sezvo iri nhevedzano, iine yakawanda nguva yeku kutandara mune zvimwe rondedzero nhoroondo, zvaunowana ndizvo Dzora chaizvo kunyorwa kuya.
Haisi chibvumirano chakaipa futi, na John Turturro, saGuillermo de Baskerville, Rupert everett saBernardo Gui, kana kuti humwe hutera hwemunhu ndiye weScotsman James cosmo, wekusingaperi uye akasarudzika wechipiri, uyo anotamba ari bofu monk Jorge de Burgos Asi zvese zvese zvinoita sekugara vasati vasvika uye, pamusoro pezvose, ndizvo zvakanyatsonaka uye haina rima remuvhi vhezheni.
Mwanakomana kuenzanisa izvo hazvifanirwe kuitwa asi ivo ivo zvisingadzivisikikunyanya kana paine Referrer izvozvo, kutaura chokwadi, hapana chikonzero chekubata. Kana iri yekuunza nyaya padhuze nevateereri vadiki kana yeiyi nguva, yakakwana. Asi kune vamwe vese, ngatiti anowana kupasa kwakanaka.
Harlan coben ndiye munyori wekuNorth America anosaina inovawodhi uye zvakare anogadzira akateedzana aya anotepfenyurwa mukati Netflix. Nyanzvi munhau yekuparwa kwemhosva kana, panzvimbo pezvo, iyo thrillerake kubudirira kukuru chinyorwa ndechekuvaraidza kwazvo nhevedzano ye Myron bolitar. Asi ine mamwe akawanda mazita akadai seaya ekunyongana uye kurondedzera kunokanganisa hakuregi kuitika.
Izvi ndizvo zvinoitika mune izvi miniseries, yakagadzika mune yazvino yeguta diki reChirungu. Pane kusiyana neyekutanga, asi nemunyori pamusoro, iyo zano iri kuwana ritmo muchikamu chimwe nechimwe, ne yekupedzisira twist kuita kuti uende kunotevera usina kufunga. Muchidimbu, a nguva yakanakakunyangwe, pamwe, zvichitambura nekumwe kumhanyisa.
Iyo ine nyeredzi nevatambi veBritish senge Richard Armitage o Stephen Rea. Armitage inotamba Adam Mutengo, UN gweta nababa kubva kumhuri yepakati yepakati mhuri ine vana vaviri. Rimwe zuva a hazvizivikanwe izvo zvinozivisa a kudedera zvakavanzika nezve ake mukadzi izvo zvichazungunusa imba yako nekukonzera iyo kunyangarika iye.
Kubva ipapo, kune dzimwe nguva dzakatovepo vanhu vazhinji mutorwa akamutenderedza kuverenga zvinhu zvinokanganisa masheya yezvose. Uye ivo vanozotokanganisa zvizere iyo vaviri vechipurisa anoona nezve kuferefeta chimwe chiitiko chinoshamisa chinosanganisira vadiki vakati wandei vaive kumafaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Zita rerosi uye Usataure nevasingazive. TV dzino